အချစ်ကြီးသလို သစ္စာလဲအရမ်းကြီး တဲ့ တနင်္ဂနွေ – XB Media Myanmar
အချစ်ကြီးသလို သစ္စာလဲအရမ်းကြီး တဲ့ တနင်္ဂနွေ
တနင်္ဂနွေ သားသမီးဆိုတာ.. … (စိတ်နေသဘောထား လေ့လာမိသလောက်)
(1)အချစ်ကြီးသလို သစ္စာလဲအရမ်းကြီးတယ် အပေါင်းအသင််း မက်တဲ့နေရာမှာလဲ သူများနဲ့မတူအရမ်းမက်တယ် ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းကြတော့ သာပေါင်းတွေနဲ့ပဲကြုံရ လို့အမြဲ တစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်နေတတ်တယ်…. (2)စိတ်ဓာတ်မာကြောတယ်လို့ထင်ရပေမယ့်် တကယ်တမ်းကျတော့ စိတ်ထားအရမ်းနူးညံတယ် ကိုယ်ကအနစ်နာခံပြီးပေါင်းသလောက် ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းဘူးထင်ရင်လဲ ဘယ်လောက်ထိခင်ခင်စွန့်လွှတ်ဖို့ဝန်မလေးသူတွေ အဲ့လောက်ထိပြတ်သားတာ
(3)ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီးသားကိစ္စတစ်ခုကို မှားမှားမှန်မှန် နောက်ပြန်မဆုတ်တတ်တဲ့သူတွေထဲမှာ တနင်္ဂနွေ သားသမီးကထိပ်ဆုံးကပေါ့…. (4)လူတိုင်းအပေါ်အားနားတတ်လို့ အမြဲခံရပေမယ့် ပြံုးပြံုးပဲ စိတ်နာပြီဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်ပဲကောင်းပြပြလုံးဝလှ ည့်မကြည့်တတ်သူတွေ….. (5)တနင်္ဂနွေ သားသမီးတွေက အချစ်ရေးမှာ အမြဲအချစ်ဦးနဲ့ လွဲဲတယ် အပြင်ပမ်းကြည့်ရင် မာနကြီးတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်ပေါင်းကြည့်ရင်တော့ သိလိမ့်မယ်
(6)တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေက အချစ်ရေးမှာကံမကောင်း်ပေမယ့် ချစ်သူကိုအရမ်းချစ်တတ်တဲ့သူတွေပါ…….. (7) တနင်္ဂနွေ သားသမီးတွေရဲ့ ထူးခြားချက်က စန်းပွင့် တာပဲ စော်ကြည် ဘဲကြည်တွေ…. (8)အငြိုးအတေးမထားတတ်ပေမယ့် တုန့်ပြန်တတ်တဲ့စိတ်တော့သူတို့မှာရှိြ်ကတယ်…. (9) ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့အရာအတွက် ်တစ်မြေ့မြေ့နောင်တရနေမဲ့အထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေ မပါဘူး အဲ့လောက်ထိပြတ်သားတာ….
(10) တနင်္ဂနွေ တွေရဲ့စိတ်က နူးညံ့ သလောက်အရမ်းပြတ်သားတဲ့အတွက် သူတို့စိတ်နာပြီဆိုရင် နာမည်တူတောင်မကြားချင်တော့တဲ့အထိဖြစ်သွားတတ်လို့ စိတ်နာအောင် မလုပ်မိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်
(1)အချစ်ကြီးသလို သစ္စာလဲအရမ်းကြီးတယ် အပေါင်းအသင်း မက်တဲ့နေရာမှာလဲ သူများနဲ့မ တူအရမ်းမက်တယ် ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းကြတော့ သာပေါင်းတွေနဲ့ပဲကြုံရလို့အမြဲ တစ် ယောက် ထဲ ဖြစ်နေတတ်တယ်… (2)စိတ်ဓာတ်မာကြောတယ်လို့ထင်ရပေမယ့်် တကယ်တမ်းကျတော့ စိတ်ထားအရမ်းနူးညံတယ် ကိုယ်ကအနစ်နာခံပြီးပေါင်းသလောက် ကိုယ့်အေ ပါ် မကောင်းဘူးထင်ရင်လဲ ဘယ်လောက်ထိခင်ခင်စွန့်လွှတ်ဖို့ဝန်မလေးသူတွေ အဲ့လောက်ထိပြတ်သားတာ
(3)ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီးသားကိစ္စတစ်ခုကို မှားမှားမှန်မှန် နောက်ပြန်မဆုတ်တတ်တဲ့သူတွေထဲမှာ တနင်္ဂနွေ သားသမီးကထိပ်ဆုံးကပေါ့…. (4)လူတိုင်းအပေါ်အားနားတတ်လို့ အမြဲခံရပေမယ့် ပြုံးပြုံးပဲ စိတ်နာပြီဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်ပဲကောင်းပြပြလုံးဝလှည့်မကြည့်တတ်သူတွေ…. (5)တနင်္ဂနွေ သားသမီးတွေက အချစ်ရေးမှာ အမြဲအချစ်ဦးနဲ့ လွဲတယ် အပြင်ပမ်းကြည့်ရင် မာနကြီးတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်ပေါင်းကြည့်ရင်တော့ သိလိမ့်မယ်
(6)တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေက အချစ်ရေးမှာကံမကောင်းပေမယ့် ချစ်သူကိုအရမ်းချစ်တတ်တဲ့သူတွေပါ….. (7) တနင်္ဂနွေ သားသမီးတွေရဲ့ ထူးခြားချက်က စန်းပွင့် တာပဲ စော်ကြည် ဘဲကြည်တွေ… (8)အငြိုးအတေးမထားတတ်ပေမယ့် တုန့်ပြန်တတ်တဲ့စိတ်တော့သူတို့မှာရှိြ် ကတယ်… (9) ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့အရာအတွက် ်တစ်မြေ့မြေ့နောင်တရနေမဲ့အထဲ မှာ တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေ မပါဘူး အဲ့လောက်ထိပြတ်သားတာ…. (10) တနင်္ဂနွေ တွေရဲ့စိတ်က နူးညံ့ သလောက်အရမ်းပြတ်သားတဲ့အတွက် သူတို့စိတ်နာပြီဆိုရင် နာမည်တူတောင်မကြားချင်တော့တဲ့အထိဖြစ်သွားတတ်လို့ စိတ်နာအောင် မလုပ်မိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်
(လေ့လာမိသလောက်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်)Nan Khon Sett
ရှုတင်ကပြန်အလာ ပြေးကြိုတဲ့ချစ် သားလေးကြောင့် ကြည်နူးပီတိြ ဖ စ်ပြီးချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ ဖေဖေမြင့်ြ မတ်